Osisi Solanuz bụ naanị ụlọ ọrụ na Central Asia ọkachamara na mmepụta nke ngwaahịa mechara site na poteto - "Potato System" magazine
Osisi a lekwasịrị anya na mmepụta nke fries French na flex. The imewe ike bụ 20 puku tọn okokụre ngwaahịa kwa afọ. Ndi oru ahu bidoro oru ya na March 2019 na Tashkent.
French fries maka Uzbekistan abụghị ngwaahịa a maara nke ọma, ọdịbendị nke oriri ya amalitebeghị. Tashkent naanị na-erepịakwa ihe dị ka tọn 500 nke fries French kwa ọnwa. Na mgbakwunye, fries french na flex nwere ezigbo mbupụ ikike: enweghị ụdị ụlọ ọrụ ndị dị na mba ndị agbata obi. Ọrụ ogologo oge nke Agrover LLC, onye na-emepụta ihe nduku kacha ukwuu na Uzbekistan, enyela osisi ahụ ọtụtụ ngwaahịa zuru oke.
Mwepụta nke usoro mmepụta were ihe dị ka afọ 4. N'oge a, a gbakọtara ma nwalee akụrụngwa Dutch, a zụrụ ndị ọrụ, a haziri usoro izizi mbụ. Ọnwụnwa dịgasị iche iche nọrọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ atọ, nke mere ka o kwe omume ịhọrọ naanị otu na-enye france kacha mma site na ụdị 12.
Ezigbo oval poteto, dị ka ibe ya dị ka ụmụ ejima, na-asa ma na-ehicha uzuoku mgbe sorting. Ọzọkwa - ịkpụchasị igwe na okpukpu abụọ ruo ọkara dị njikere. Mgbe ahụ, mpekere ndị ahụ na-aga maka frying na usoro nke abụba abụba miri emi, site na ebe ha na-aga ozugbo na oge oyi oyi, na-awụ akpata oyi oyi ụlọ. Mmanụ a Fụ na-ekesa na sistem ma gafere site na nzacha: a na-ere ihe dị ka kilogram 2 nke mmanụ maka tọn 250 nduku. Na atụmanya nke okwu ahụ, mmanụ na-achịkwa njikwa mma yana enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ ike.
French friji oyi kpọnwụrụ na -35 degrees na-juru n'ọnụ, packaged ma zipụ maka ire. Ngwaahịa a dịla njikere maka ojiji. O zuru ezu ighe ya maka minit ole na ole na miri miri emi ma ọ bụ na pan nke frying, na ruddy crispy Mpekere na puree-dị ka pulp ga-ejupụta na kichin gị na-esi ísì ụtọ. Site n'ụzọ, n'adịghị ka fries anyị na - emebu - jiri aka aka anyị sie ya ma ọ bụ jee ozi n'ụlọ nri, ngwaahịa Solanuz anaghị eme ka ọ dị nro mgbe ọ jụrụ oyi, mana ọ ka bụ otu ọla edo na agbụ.
Onweghi ihe n’enweghi isi na flakes. Mba “onwu”: ekpomeekpo, ihe ndozi, ngwa nri. Enweghị ọbụna nnu a na-ahụkarị, ndị na-azụ ahịa ga-agbakwunye ihe niile n'onwe ya, dịka o si atọ ụtọ. A na-akwado flakes site na iji teknụzụ yiri ya. Saa na peeled poteto na-ebipụ, blanched na kpamkpam Fikiere. N'okwu a, mpekere ndị ahụ na-efunahụ mmiri niile, mgbe nke ahụ gasịrị, e zigara ha na igwe nri, ebe a na-echi ha ọnụ ntụ. Ma mgbe ahụ - ịkwesịrị ịgbakwunye mmiri.
Ike osisi ahụ na-enye ihe nhazi ihe dịka tọn 170 nke nduku kwa ụbọchị. Ha na-eme ihe dị ka tọn 50 nke French fries na tọn 13 nke flakes. Akara ahụ na-akpaghị aka dị ka o kwere mee, ndị ọrụ 15 nọ na ngbanwe ọ bụla. Ndị na-ege ntị na-agbaso usoro ahụ, ndị na-ebu ngwugwu na-agbakọ ngwaahịa ahụ agwụla. Otu ugboro n'izu, akara dum na-akwụsị maka nhicha.
LLC "Agrover" na-ezube iziga maka nhazi ihe ruru 80% nke poteto niile toro eto. Osisi ahụ ga-emepụta ihe karịrị otu puku tọn nke ngwaahịa gwụchara kwa ọnwa.
Tags: ndukuFrench fires emepụtaraUzbekistan
Ibe maka ndị na-eri
A ga-enwe microcensus ọnụọgụ na Russia na 2021
Idebe mmiri na-atụ anya na Uzbekistan
AGROSALON maka nchekwa!